कलियुगका कुरा: मायाले अगाडि बन्द
Rabin Dahal, Crezy Pot Pattu Tori, Ujwal Ojha and 105 others like this.
Banjade Ganesh Prasad जात भात छौडौ भाईचारा एकता र सहिष्णुता कायम गरौं ।
May 20 at 6:33pm ·
Sabin Singh मेरी लैलालाइ आज भेट्न नपाएर बन्द खेर गयो, दाजुले बेलाँ भन्या भे म पनि लिफ्ट माग्थेँ नि हउ
May 20 at 6:36pm ·
Banjade Ganesh Prasad होइन अब त ! press लाई पनि नछोड्ने भइ हाले के जमाना आयो ? कसरी समाचार बन्छ त ?
May 20 at 6:37pm ·
Shiksha Risal ha ha ha :D
May 20 at 6:38pm ·
Dipak Bhattarai Note ती लैला हेर्दामा पहाडी बाहुनी जस्ती छन् र ती मजनु चाहिँ मधेशी जस्ता छन्।
DipeNdra Nepali ADhikari · 26 mutual friends
diusai jhadap paryo hola ni madesh ra pahad ki ko
May 20 at 6:39pm ·
Madhab Bhattarai एकल पहिचानको संघियताको नाममा पाँच बर्ष अगाडीको एउटा बिहारीको भन्दा पनी तल्लो स्तरको पहिचानमा पुगे पछी त झनै नतमस्तक हुनै पर्छ दिपक जी. अहिले देखी नै तयार भएर बसौ //
May 20 at 6:40pm ·
Govinda Adhikari सेना, प्रहरी कि नेता, अभिनेता कोही हुनुपर्छ । हुन त यू सबैका प्रणेता व्यापारी पनि हुनसक्छन् । तर सम्बन्ध अपवित्र हो भने लैला र मजनुको नाम बदनाम गर्न पाप हुन्छ ।
May 20 at 6:43pm via mobile ·
Sharma Durga Prasad · 200 mutual friends
May 20 at 6:52pm ·
Meg Thada kasri aayo ni ta bhai asto bandama ni tyo jeep
May 20 at 7:21pm via mobile ·
May 20 at 9:07pm ·
Saurav Dhakal मायाको अगाडि बन्दले के गर्छ र ?
May 20 at 9:32pm ·
Keshav Upadhyaya मज्नु कुनै आङ्काजी होला ।
May 20 at 10:08pm ·
Rajendra P Sharma · 66 mutual friends
सहर जलिरहेको बेला, पत्रकार कुटीई रहेको बेला दिपक जी ले छिमेक कै खबर बनाउनु भयछ, त्यस्तो जिप को फोटो नि हेर्न पाउन हो
May 20 at 10:12pm ·
Kalyan Gurung समाचार सङ्कलनको लागि खटिएका पत्रकारहरुलाई कुटपिट गर्ने र उनिहरु चढेको सबारी साधन तोडफोड गर्ने कार्य अत्यन्त गम्भिर प्रकृतिको निन्दनिय र घृणित कार्य हो । यस कार्यको सबै पक्षबाट घोर भत्सर्ना र बिरोध हुनै पर्दछ । यस्तो घृणित र निन्दनिय कार्य गर्ने र गराउनेहरु जो सुकै भए पनि वा जुनसुकै सस्था र दलको भएपनि उनिहरुले सार्बजनिक रुपमा माफी माग्नु पर्दछ । अब कुनै पनि ब्यक्ति, सस्था वा दलहरुबाट यस्ता नकारात्मक कार्य हुनु हुदैन । ब्यक्तिगत स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, निजि सम्पतिमाथिको अधिकार र बिधिको शासन लोकतान्तृक मुल्य र मान्यताहरु हुन् । सन्चार माध्यम र पत्रकारहरु सबैको साझा सम्पति हो । सन्चार माध्यम र सम्पुर्ण पत्रकारहरुलाई जोगाउनु, हुर्काउनु, सम्मान गर्नु, सहयोग गर्नु र स्वतन्त्र रहनु दिनु हामी सबैको कर्तब्य र दायित्व हो । प्रेस स्वतन्त्रता बिना लोकतन्त्र र लोकतान्तृक अधिकारहरुको सुनिश्चितता हुन सक्दैन ।
May 21 at 1:22am ·
नेपालका केहि पत्रकार र संचार गृह भारतीए दलाल हुन तेसैले सालेहरुलाई अझै ठोक्न पर्ने हो ।अझै पुगेन ।पित पत्रकारिताको प्रतिफल हो ।सबै पत्रकारलाई एउटै व्यबहार गर्नु भने दुखत कुरा हो ।
13 मिनेट अगाडि · मनपर्‍यो
May 21 at 12:27pm ·
Acharya Deepak maya bhanne yesto hunchha
May 21 at 2:18pm ·